Global Voices quinceañera: Rehefa nanao ny mety i Karaiba · Global Voices teny Malagasy
Andiany 5: Fisainana indray ny fanabeazana, fiadiana kolikoly ary fanajana ny vahoaka indizeny
Voadika ny 03 Janoary 2020 6:08 GMT
Amin'ity andiany farany hanomezam-boninahitra ny tsingerintaona faha-15 [mg] ny Global Voices ity, nasongadinay ireo tantara nahatonga ny olona hiteny amin'ny trangan-javatra nanimba ny faritra na nijoroany tamin'ny mety teo anatrehan'ny tantara.
Tamin'ny jona 2019, nanambara [mg] ny praiminisitr'i Barbados Mia Mottley, izay efa nanaporofo ny tenany anisan'ny lasa aloha ara-pisainana ao amin'ny faritra fa, ao anatin'ny ezaka hitadiavana hirika ara-panabeazana ho isankarazany sy mitovy lanja ho an'ny mpianatra, dia nanapa-kevitra ny fitantanana hanaisotra ilay fanadinana iraisana (Common Entrance) mampiady hevitra.
Efa ho zato taona mahery izay, nolovaina avy amin'ny fanjanahantany fa efa taloha ela hatramin'ny taona 1879 ho an'ny zaratany sasany ny fanadinana hidirana sekoly ambaratonga faharoa tany Karaiba. Na dia im-betsaka novaina anarana sy namboarina imbetsaka aza izy ireny, dia mbola nitoetra hatrany ao anatin'izay ambaran‘ireo manampahaizana manokana maro ho fitsapam-pahaizana tsy mitombina loatra sy mandreraka ny saina ary manaisotra ny fifaliana hianatra amin'ireo ankizy 11 taona ao amin'ny faritra.
Any amin'ny zaratany hafa ao amin'ny faritra tahaka an'i Trinite sy Tobago, ankoatra ny taraina momba ny voka-dratsy ateraky ny fanadinana tahaka itony, dia nisy ny fiantsoana hisian'ny fampiatiana ireo ankizy manana filana manokana, izay matetika tsy iantsorohan'ny rafitry ny sekolim-panjakana araka ny tokony ho izy.
Raha mahomby tamin'ny ezaka izao i Barbados, dia ho tafiditra ao anatin'ny tantara izany; efa nisy ireo governemanta hafa ao amin'ny firenena anatin'nyCARICOM no nampanantena ny hanafoana ny fanadinana fa tsy nahomby tany aloha tany..
Iray amin'ireo fototry ny olana maro atrehin'ny fiarahamonim-paritra ny kolikoly [mg] — manomboka servisy sosialy tsy araka ny tokony ho izy ka hatramin'ny fiakaran'ny tahan'ny heloka bevava. Niteny ny olona manerana an'i Karaiba rehefa nahatsapa izany — manomboka fihetsiketsehana an-dalambe ao Haiti ho fanoherana ny fanafintohinana ao amin'ny PetroCaribe ka hatramin'ny nisamborana tompon'andraikitra ambony iray [mg] ao amin'ny governemanta Trinidadiana ho nanao famotsiam-bola, firaisana tsikombakomba amin'ny fanaovana hosoka, ary fitondran-tena ratsy ao amin'ny biraom-panjakana.
Raha ny marina, matetika hita amin'ny tantaran-kolikoly nosoratanay i Trinite sy Tobago tamin'io taona io. Feno ny [mg] fanerem-bahoaka ka nahatery ny governemanta hanongotra ny volavolam-panitsiana “tsy demaokratika” amin'ny lalànan'ny fahalalahana fahazoana torohay/vaovao ary, taorian'ny niampangana ny mpitarika ny sendika iray ho manao fampisaraham-bazana, dia niely fatratra ny adihevitra momba ny fahalalaham-pitenenana, ka nanery indray ny governemanta hamerina handinika ny lalànan'ny fampisaraham-bazana [mg].
Taorian'ny nivoahan'ny fanadihadiana nivoaka tao amin'ny Netflix, “The Great Hack”, nivoaka voalohany tamin'ny Jolay 2019, nafana dia nafana ny adihevitra tamin'ny andraikitry ny Cambridge Analytica tamin'ny fifidianana tany Trinite sy Tobago tamin'ny taona 2010, ka manavao ny ahiahy fa mora mifampitantana ny kolikoly sy ny fanabadoana mpifidy.
Niverina matanjaka ny mahazavadehibe ny vakoka navelan'ny vahoaka indizeny tao amin'ny faritra tamin'io taona io. Jamaika izao ohatra, niaina amin'izany fahalianana amin'ny tantaran'ny Taino (na Arawak) izany: Sambany tao anatin'ny 500 taona, Sambany i Jamaika nanana izany sefon'ny Taino (cacique) izany voalohany, izay napetraka ho eo amin'ny toerany tamin'ny Jona 2019. Iray volana talohan'izany ny Ivontoeran'i Jamaika nankalaza ny Andron'ny Taino izay nahitana antsafa sy hetsika, ka tafiditra anatin'izany ny famoahana boky voaravaka ho an'ny ankizy.
Mbola misy zavadehibe kokoa noho izany, niasa ny governemanta Jamaikana — tamin'ny alalan'ny Vaomiera Nasionalin'ny Fanonerana — hamerenana avy any amin'ny vondro-nosy britanika ireo fanaka Taino vita amin'ny hazo. Niteny momba ireo fanaka [artefacts] ireo ny Minisitry ny Kolontsaina, ny Vehivavy, ny Alavoly ary ny Fanatanjahantena Olivia Grange, izay nitarika izao ezaka izao:
Any amin'ny farany atsimo amin'ny tangoronosy anefa mandritra izany fotoana izany, ao Trinite sy Tobago, misy ny tabataba [mg] amin'ny tolokevitra hanovana ny anaran'ny seranam-piaramanidin'ny firenena avy amin'ny Piarco (anarana indizeny) ho anarana fanajana ny praiminisitra voalohany ao amin'ny firenena. Saingy ny lanonana nampihetsi-po indrindra dia ny famerenana amin'ny toerany indray ny sisa tavela amin'ny Vahoaka Voalohany ao Trinite sy Tobago.
Ho an'ny vondrom-piarahamonin'ny Vahoaka Voalohany, fitakiana ny ampahany lehibe tamin'ny lasan-dry zareo izany. Nandritra ny lanonam-pamadihana, nilaza ny Lehiben'ny Vahoaka Voalohany tao San­ta Rosa, Ricardo Bharath-Hernandez, fa izany no fomba ahafahan'ny razan-dry zareo miteny amin-dry zareo sy fotoana hahatsiarovana araka ny tokony ho izy ny maty ao aminy: